In Real Madrid Ay Aheyd Kooxdii Ay Doonayeen, Qorshihiisa CR7, Haddii Uu Ka Aargudanayo Perez & Real Iyo Wax Walba Uu Manuel Pellegrini Kaga Hadlay Wareysi Uu Siiyay Jariirada AS. | Haqabtire News
In Real Madrid Ay Aheyd Kooxdii Ay Doonayeen, Qorshihiisa CR7, Haddii Uu Ka Aargudanayo Perez & Real Iyo Wax Walba Uu Manuel Pellegrini Kaga Hadlay Wareysi Uu Siiyay Jariirada AS.
Manuel Pellegrini ayaa wareysi siiyay jariirada AS ka hor kulanka Manchester City ay lugta hore ee wareega afar dhamaadka Champions League ay la ciyaareyso kooxdiisa hore ee Real Madrid.
Waxaa tiri ka dib isku aadka inaad ku faraxsan tahay inaad la ciyaareyso Madrid. Sabab?
Real waxa ay aheyd kooxdii aan dooneynay laakiin haddii ay inagu soo aadi laheyd Atletico ama Bayern Munich isku mid ayay inoo ahaan laheyd. Dhamaan seddexda kooxood waa ay adag yuhiin, muhim ayay inoo tahay inaan la ciyaarno koox maqaamkeeda Real Madrid uu yahay.
Ma u aragtaa kulamadaan fursad aad uga aargudato Real Madrid?
Maya, ma jirto cid aan waxba ka aargudanayo.
Ma u aragtaa kulankaan fursad aad kaga aargudato Florentino Perez madaama uu ku ceyriyay?
Wax colaad ah uma qabo Florentino Perez ama boodhka Real Madrid. Nasiib ayaanba ku lahaa inaan tababare ka noqdo koox weyn muddo hal xilli ciyaareedkan, malaha xaalada ayaa noqon weysay sidii ugu fiicneyd. Laakiin wacdarro ayaan ka dhignay La Liga, waqtigaasna waxa ay aheyd xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa Real ee taariikhda. Aniga ahaan waxa ay mar walba ii aheyd wax aan ku faano inaan tababare ka soo noqday Real Madrid, wax jaceyl ahna uma qabo aargudasho aan ka aarguto qofna.
Inaad gaarto finalka Champions League ma waxay ku tahay dhiirogelin dheeria h ka dib xilli ciyaareed adag oo ku soo maray markii Pep Guardiola lagu dhawaaqay?
Ma aqaano sida aad ku qeexi karto xilli ciyaareed adag. Waxaan ku guuleysanay League Cup, waxaana semi-finalka ka joognaa Champions League markii ugu horeysay taariikhda kooxda, waxaan kaalinta 3aad kaga jirnaa Premier League oo waxaan u soo baxeynaa Champions League xilli ciyaareedka danbe. Gabi ahaanba ma aysan aheyn xilli ciyaareed adag. Waxaan dooneynaa inaan xilli ciyaareedka ku dhameysano si fiican koobka Yurub oo aan ku guuleysano koobka, waxaana ay u noqon laheyd kooxda wax weyn madaama aysan gaarin wareega 16ka ka hor inta aan aniga imaanin.
Sideed ku dhaawici kartaa Real Madrid?
Inaan u ciyaarno sida aan haatan u ciyaareyno. Marnaba uma bedeleyno qaabka ciyaarteena madaama aan Real Madrid la ciyaareyno. Ciyaartoy tayo leh ayaa ka buuxda kooxdeena, waana inaan ciyaarno ciyaar dhameystiran. Wareegaan waxa uu soconayaa 180 daqiiqo, waxaana lugta hore ku ciyaareynaa garoonkeena. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan u ciyaarno sida aan caadiyan u dheelno balse aan sidoo kale xisaabta ku darsano awooda Real Madrid ay leedahay.
Kulankii Barcelona labo xilli ciyaareed ka hor waxaa ku ciyaartay labo burburiye oo khadka dhexe ah si aad u celiso Messi. Qorshe gaar ah miyaad u dejisay Cristiano Ronaldo?
Waqtigaas qaab cusub ayaan u ciyaareynay. Qorshaheenana waa uu inoo fiicnaa ilaa iyo rigooradii laga dhigay Demichelis, taasoo aan rigoore aheyn sababtoo ah waxa ay aheyd banaanka xerada goolka. Laga bilaabo markaas ciyaarta waa ay isbedeshay. Waana ay sii adkaatay. Mararka qaar waan bedeli karnaa taatikada kooxda laakiin shaqsiyada kooxdiisa marnaba isma bedeleyso.
Ronaldo ma yahay walwalkaaga kuugu weyn?
Cristiano xilli ciyaareed walba ayuu saameyn weyn ku leeyahay Real Madrid tan iyo markii uu halkaas tagay. Dabcan xiddiga ugu goolasha badan ayaa ah xiddiga laga walwalo. Laakiin haddii aan diirada saarno kaliya sidii aan ku celin laheyn Ronaldo waxa ay noqon doontaa qalad weyn sababtoo ah waxa ay heystaan ciyaartoy kale sida Bale, Benzema, Kroos iyo Modric.
Ma u maleyneysaa inuu dhaawac ku seegi doono kulanka talaadada?
Waxaan ku rajo weynahay isaga dartiis iyo tan iyo Real Madrid inuu soo kabsado. Caadiyan waxa uu ciyaaraa kulan walba sidaasi darteed uma maleynayo inuu wax dhibaato ah ku qabo inuu taam u noqdo kulankaas.
Madrid miyay ka duwan tahay kooxdii aad adiga tababaraha u aheyd?
Dabcan waxaa jiray isbedelo badan sababtoo ah taasi waxa ay aheyd lix sannadood ka hor. Ciyaartoyda waa ay kala duwan yihiin, weli waxaa jooga ciyaartoy waqtigeygii aheyd laakiin kooxda si ka duwan sidii hore ayay u ciyaartaa. Waa koox Real Madrid oo aad u fiican.
Qorre: Maxamed Cawil (jeesto)